Britain ayaa u qabatay Faransiiska 48 saacadood inay ka laabato hanjabaadaha ka dhanka ah kalluumeysiga - Diblomaasi
Muranka ayaa sii xoogeystay todobaadkii hore markii Faransiisku ay ku qabteen biyaha Faransiiska meel u dhow Le Havre nin u dhashay Britain oo lagu magacaabo Cornelis Gert Jan, isagoo sheegay in uusan haysan shatigii loo baahnaa, inkastoo mulkiilaha doonta uu sheegay in uu haysto dhammaan dukumeentiyadii ku habboonaa.
Britain ayaa u sheegtay Faransiiska isniintii in ay waajib ku tahay in ay dib uga laabato 48 saacadood gudahood isku dhac kalluumeysi oo khatar ku ah in uu u wareego muran ganacsi oo ballaaran ama uu wajihi doono tillaabo sharci ah oo ciqaab ah sida uu dhigayo heshiiska ganacsiga Brexit.
Faransiiska ayaa sheegay in Britain ay diiday inay siiso kalluumaysatadeeda tirada saxda ah ee shatiyada ay kaga hawlgalaan biyaha Britain, waxayna sheegeen inay soo rogi karaan tallaabooyin la beegsanayo laga bilaabo talaadada, oo ay ku jiraan in la adkeeyo qaar ka mid ah hubinta baabuurta xamuulka ah ee isaga kala goosha wadamada dariska. Britain ayaa sheegtay inay ruqsado siinayso maraakiib caddaynaysa inay hore uga kalluumaysanayeen biyaha Ingiriiska.
“Faransiiska waxay sameeyeen hanjabaado aan macquul ahayn, oo ay ku jiraan jasiiradaha Channel-ka iyo warshadaha kalluumeysiga, waxayna u baahan yihiin inay ka baxaan hanjabaadahaas haddii kale waxaan isticmaali doonaa hababka heshiiska ganacsiga ee EU si aan tallaabo u qaadno,” Xoghayaha Arrimaha Dibadda Liz Truss. ayuu u sheegay Sky News. “Faransiiska ayaa u dhaqmay si aan caddaalad ahayn. Kuma jiraan shuruudaha heshiiska ganacsiga. Haddii qof u dhaqmo si aan caddaalad ahayn heshiiska ganacsiga, waxaad xaq u leedahay inaad tallaabo ka qaado iyaga oo aad raadsato tallaabooyin magdhow ah. Taasi waa waxa aan sameyn doono haddii Faransiisku dib uga noqon waayaan,” Truss ayaa yidhi.
Mar wax laga waydiiyay wakhtiga ay tahay in Faransiisku dib uga laabto, Truss waxa uu yidhi, “Arrintan waxa ay u baahan tahay in la xaliyo 48 saacadood ee soo socda.”
Waxay soo jeedisay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron laga yaabo inuu sameeyo “hanjabaado aan macquul ahayn” sababtoo ah waxaa ku soo fool leh doorasho adag.
Mar la weydiiyay sababta uu khilaafku u soo baxay, waxay u sheegtay Sky News, “Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo waxaa soo socda doorashada Faransiiska.” – Truss ayaa u muuqatay mid ka cadhootay khilaafka oo yidhi, “Kuma faraxsani waxa dhacay.”
Khilaafkaan cusub ayaa sidoo kale halis u ah inuu noqdo carqaladayn shirka cimilada COP26 ee ka bilaabmay Scotland Axadii. Paris ayaa sheegtay in laga yaabo in laga mamnuuco doonyaha kalluumeysiga ee Britain in ay wax ka soo dejiyaan dekedaha Faransiiska, in ay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan maraakiibta Britain, in la adkeeyo koontaroolka baabuurta iyo in la xoojiyo ilaalinta kastamka iyo nadaafadda haddii wadahadaladu fashilmaan.
Ra’iisel wasaare Boris Johnson ayaa Axadii sheegay inuu “la yaabay” inuu akhriyo warqad ka timid Paris oo loo diray Midowga Yurub. Waxaa soo diray ra’iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex, waxay ugu yeertay ururka inay muujiyaan “waxyeelo badan oo soo gaartay ka bixista Midowga Yurub marka loo eego inay halkaas ku sii jiraan.”
Arrinta kalluumeysiga ayaa hakisay wadahadallada Brexit muddo sanado ah, ma ahan muhiimadda dhaqaale ee ay leedahay laakiin sababtoo ah muhiimada siyaasadeed. Haddii aan la xalin, waxay kicin kartaa bilawga tallaabooyinka khilaafka ee heshiiska ganacsiga Brexit horaantii usbuucan. Mar la weydiiyay sababta arrinta kalluumeysiga, oo ah isha fidnada dheer ee u dhexeysa Faransiiska iyo Britain, ay mar kale u xumeysay xiriirkooda, Truss ayaa soo jeedisay in laga yaabo inay wax ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee sannadka soo socda ee Faransiiska.
Pierre-Henri Dumont, oo ah siyaasi Faransiis ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, ayaa sheegay in Faransiisku kaliya doonayo in Britain ay “fuliso ballamihii ay samaysay intii lagu jiray heshiiskii Brexit ka dib.”
Waxa uu sheegay in uu u malaynayo in “wada xaajood adag” laga yaabo in loo baahdo in lala furo dhinaca Ingiriiska. Waxa uu u sheegay barnaamijka BBC Radio 4’s Today: “Waxa aan weydiinayno waa uun in dowladda Britain ay fuliso oo ay fuliso ballamihii ay samaysay markii ay saxiixday heshiiskan Brexit ka dib.
“Ma waydiisanayno (wax kale) mar dambe. Ma codsaneyno wax aan heshiiskan ku jirin, waxaan kaliya ka codsaneynaa dowladda Ingiriiska inay fuliso oo ay ilaaliso saxiixeeda.”
Laakin Truss waxa uu sheegay in Britain aysan “ka wareegi doonin” hanjabaadaha Faransiiska. Waxay u sheegtay barnaamijka BBC Radio 4’s Today: “Faransiiska wuxuu u baahan yahay inuu ka laabto hanjabaadahaas haddii kale waxaan adeegsan doonnaa habka xallinta khilaafaadka ee heshiiska EU si aan tallaabo u qaadno.
“Si fudud uma socon doonno in aan ku dul wareegno hanjabaadahaas.”
Related Topics:Britain ayaa u qabatay Faransiiska 48 saacadood inay ka laabato hanjabaadaha ka dhanka ah kalluumeysiga
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ugu yeeray shir madaxeedka fursad “sidii wax loogu qaban lahaa” ka hor shirka cimilada ee Q.M ee COP26 ee Glasgow in hoggaamiyeyaasha G-20 ay ka qayb qaadan doonaan ka dib kulankooda Talyaaniga.
Shir madaxeedka G-20 ee uu Talyaanigu martigeliyay ayaa Sabtidii ka furmay magaalada Rome, halkaas oo hoggaamiyeyaasha dhaqaalaha adduunka ugu waaweyn ay kaga wada hadleen arrimaha khuseeya labada dhinac, oo ay ku jiraan soo kabashada masiibada cudurka korona fayrus iyo isbeddelka cimilada.
Roogga cas ayaa lagu fidiyay La Nuvola, Xarunta Shirarka ee Rome, iyadoo Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu soo dhaweeyay Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha kale iyadoo ay jiraan borotokool adag oo COVID-19 ah.
Shir madaxeedkan ayaa ah kii u horeeyay ee ay hogaamiyayaasha si fool ka fool ah u kulmaan muddo labo sano ah, kadib shirkii macmalka ahaa ee sanadkii hore ay martigelisay Sacuudi Carabiya. Waxaa ka maqan Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Madaxweynaha Mexico Andrés Manuel López Obrador. Waxay ugu biiri doonaan shirka qaab fogaan arag ah, iyagoo tixraacaya welwelka laga qabo cudurka faafa ee korona fayrus.
Isbeddelka cimilada, tallaallada, soo kabashada, canshuuraha caalamiga ah waa dhammaan mowduucyada ku jira hogaamiyayaasha qabanaya shir madaxeedkoodii ugu horreeyay ee qof ahaan tan iyo markii uu aafada faafaysa qabsaday dunida. Baaqa ku saabsan caawinta tallaalka wadajirka ah oo dheeri ah oo loogu talagalay waddamada dakhligoodu hooseeyo ayaa ah mowduuc ka dhex socda shir madaxeedka G-20, kaasoo ka tarjumaya soo kabashada caalamiga ah ee laba-raac ee waddammada hodanka ah ay si dhaqso ah dib ugu soo laabanayaan.
Wax ka qabashada iyo ka hortagga cudurka faafa ee COVID-19
Jimcihii, wasiirrada caafimaadka iyo maaliyadda ee G-20 ayaa soo saaray war-murtiyeed ay ka go’an tahay in masiibada gacanta lagu dhigo sida ugu dhaqsaha badan. Waxay sheegeen in G-20 ay qaadi doonto dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo horumariyo himilooyinka caalamiga ah ee tallaalka ugu yaraan 40% dadka ku nool dhammaan waddamada dhammaadka 2021 iyo 70% bartamaha 2022, sida ay ku talisay Ururka Caafimaadka Adduunka. .
Si kastaba ha ahaatee, wasiirradu waxay ku heshiin kari waayeen hab maalgelineed oo gooni ah iyo isuduwidda si loogu diyaargaroobo masiibada mustaqbalka ee ay soo jeediyeen Mareykanka iyo Indonesia.
“Ma raadineyno natiijada kama dambaysta ah ee habka maalgelinta ama natiijada kama dambaysta ah ee koox hawleed ama guddi ka shaqayn doona nooc ka mid ah hay’adaha isku-dubbaridka caalamiga ah ee hore u socda,” Lataliyaha Amniga Qaranka Jake Sullivan ayaa u sheegay VOA-da asigoo kula hadlay qadka telefonka asigoo saaran diyaaradda Force One oo ku sii jeeda Rome, Khamiistii. “Marka rajadu waxay tahay in war-murtiyeedka lagu helo bayaan ujeedo ah oo ah inaan ka shaqeyn doono labadan natiijooyin.”
Magaalada Rome, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ugu yeeray shir madaxeedka fursad “sidii wax loogu qaban lahaa” ka hor shirka cimilada ee Q.M ee COP26 ee Glasgow in hoggaamiyeyaasha G-20 ay ka qayb qaadan doonaan ka dib kulankooda Talyaaniga.
“Waxaa jirta khatar weyn oo Glasgow aysan keenin,” Guterres ayaa yidhi. “Tabarrucyada hadda jira ee heer qaran oo go’aamiyey, ballanqaadyada rasmiga ah ee dawladuhu, waxay weli cambaareynayaan adduunka kor u kaca heerka 2.7,” ayuu yidhi isaga oo tixraacaya ballan-qaadkii lagu sameeyay Heshiiskii Cimilada ee Paris 2015 si loo xaddido kulaylka caalamiga ah 2 darajo Celsius-ka, oo ku habboon 1.5 darajo Celsius-ka.
Waddamada ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan ballan-qaadyo badan oo lagu dhimayo qiiqa sigaarka si ay u gaaraan bartilmaameedka qiiqa saafiga ah ilaa bartamaha qarniga, laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa ka shakisan ballanqaadyadan iskaa wax u qabso ah ee ku yimaada iyada oo aan la helin habab dhaqangelin ah.
Dalibor Rohac, oo ah aqoonyahan ka tirsan Machadka Ganacsiga Maraykanka ayaa yidhi: “Waxaa jiri doona ballan qaadyo, xaaladdii ugu fiicnayd oo la socota wixii aan ku aragnay Paris.”
Rohac ayaa intaa ku daray in si horumar looga sameeyo isbedelka cimilada, dunidu ay u baahan tahay waxqabadyo la taaban karo. “Intii la sii wadi lahaa caadadan ah in la raadiyo xal weyn oo dhinacyo badan leh, si loo sii wado siyaasado gudaha ah oo suuban oo soo dedejiya kaarboonaynta,” ayuu yidhi.
Arrinta muhimka ah ayaa ah in xubnaha G-20 ay ku heshiin karaan falalka dhuxusha. Qaramada Midoobay ayaa ku baaqday in dalalka qaniga ah ay joojiyaan dhuxusha marka la gaaro sanadka 2030-ka, balse wasiirada deegaanka ee G-20 ayaa ku guuldareystay in ay ku heshiiyaan waqtiga.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale ugu baaqay wadamada qaniga ah in ay xoojiyaan ballanqaadyada ah in ay bixiyaan maalgelin si looga caawiyo wadamada soo koraya si loo yareeyo saameynta isbedelka cimilada. Sida ku cad Heshiiskii Cimilada ee Paris 2015, waddama hodanka ah ayaa ugu yaboohay ugu yaraan $100 bilyan sanadkii maalgelinta cimilada wadamada dakhligoodu hooseeyo. Inta badan lacagtaas lama keenin oo lama siinin sida balan-qaadku ahaa.
Hogaamiyayaasha Midowga Yurub waxay la kulmi doonaan hogaamiyayaasha Afrika, waxayna kamid tahay dadaallada lagu doonayo in la sii taageero qaaradda ka dib masiibada COVID-19. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa jimcihii u sheegay suxufiyiinta inuu rajaynayo G-20 inay xaqiijiyaan $100 bilyan oo dheeri ah oo lagu taageerayo dhaqaalaha Afrika.
Lacagta ayaa lagu bixin doonaa iyada oo loo marayo meelaynta qayb ka mid ah $650 bilyan oo qiimihiisu yahay xuquuq sawireed gaar ah, oo ah qalabka sarifka lacagaha qalaad ee loo isticmaalo in lagu caawiyo maalgelinta soo dejinta ay bixiso Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF. Ka qaybgalayaasha waxaa ka mid ah Madaxweynaha Midowga Afrika Felix Tshisekedi iyo Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxda dalalka Koonfur Afrika iyo Senegal, Cyril Ramaphosa iyo Macky Sall, ayaa ka qaybqaadan doona iyada oo la adeegsanayo muuqaal toos ah sida ay sheegtay madaxtooyada Faransiiska.
Talyaanigu wuxuu rajeynayaa in G-20 uu ka xaqiijiyo ballanqaadyada muhiimka ah ee wadamada matalaya 80% dhaqaalaha adduunka – oo mas’uul ka ah qiyaastii isla qadarka qiiqa kaarboonka caalamiga ah – ka hor shirka cimilada ee Qaramada Midoobay oo Axadda ka bilaabmaya Glasgow, Scotland.
Saudi Aramco waxay ujeedadeedu tahay inay gaarto qiiqa eber ee hawlaheeda marka la gaaro 2050 iyadoo sidoo kale ballaarineysa awoodda wax-soo -saarka joogtada ah ee ugu badan illaa 13 milyan oo fuusto maalintii, ayuu yiri Madaxa Fulinta Amin Nasser Sabtidii.
Madaxa Fulinta ee shirkada Amin Nasser waxa kale oo uu ka digay in awoodda kaydka ceyriinka ee caalamiga ahi ay si degdeg ah hoos ugu dhacayso, loona baahan yahay maalgashi dheeri ah, isaga oo sheegay in “shakiyeynta” warshadaha kaarboon-ka ay ka hor imanayso xaqiijinta saadka tamarta deggan.
“Saudi Aramco waxay ku guuleysan doontaa hamiga ah inaan eber ka dhigno hawlgalladayada marka la gaaro 2050,” ayuu Madaxa Fulinta shirkada Amin Nasser ku sheegay shir-madaxeedka Hindisaha Cagaaran ee Sucuudiga, halkaas oo amiirka dhaxal sugaha boqortooyada uu horay ugu dhawaaqay in Khaliijka Carabta uu gaari doono qiiqa eber marka la gaaro 2060-ka.
Madaxa Fulinta shirkada Amin Nasser wuxuu kaloo sheegay in maalgashiga gaasku u oggolaan doono Aramco inay baabi’iso dareeraha badan oo ku gubanaya boqortooyada.
Wuxuu sheegay inay jirto baahi loo qabo kala-guur tamar oo nidaamsan leh oo si isku mid ah diiradda loogu saarayo ilaha tamarta ee hadda jira iyo kuwa cusub, laakiin wuxuu ka digay Aramco inaysan kaligeed shaqeyn karin si loo hubiyo karti saafiyadeed oo ku filan oo ay u baahan yihiin dhaqaalaha adduunka markay ka soo baxeen cudurka faafa ee koronafayrus.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, sicirka korontada ayaa kor u kacay heerkii ugu sarreeyey waxaana sicirka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah uu gaaray heer sare sanado badan. Tamar yari baahsan ayaa haleeshay Aasiya, Yurub iyo Maraykanka.
“Awoodda dheeraadka ah — tani waa aragtidayada – waxay ku dhowdahay 3-4 milyan (bpd) waxayna si dhaqso ah hoos ugu dhacaysaa,” ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray in haddii warshadaha duulimaadka caalamiga ah ay soo kabtaan markaa tani waxay nuugi doontaa qayb ka mid ah awooddaas.
“Maalgashigayagu ma noqon doono mid ku filan, adduunka intiisa kale wuxuu u baahan yahay inuu hadda sameeyo maalgashi sax ah haddii kale waxaad ku dambayn doontaa dhibaato dhaqaale oo caalami ah,” ayuu yidhi. “Dhicinta warshadaha kaarboon-karboonku cidna ma caawinayso.”
Bishii Maajo, Hay’adda Tamarta Caalamiga ah (IEA), oo ah hay’adda ugu sarreysa tamarta adduunka, ayaa warbixinteeda “Net Zero by 2050” ku sheegtay in maal-gashadayaashu aysan maalgelin mashaariic cusub oo shidaal, gaas iyo dhuxul siinta wixii ka dambeeya sannadkan.
Ka hor shirwaynaha cimilada ee Qaramada Midoobay oo bilaabmaya dhamaadka Oktoobar, IEA waxay sheegtay in maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay u baahan tahay inay saddex jibaarto dhammaadka tobbanka sano haddii dunidu ay rajaynayso inay si wax ku ool ah ula dagaallanto isbeddelka cimilada iyo in la xakameeyo suuqyada tamarta kacsan.
Waxaa soo tebiyay Yousef Saba iyo Saciid Azhar oo ku sugan Riyadh iyo Aziz El Yaakoubi oo ku sugan Dubai; Waxaa qoray Ghaida Ghantous; Tafatirka by Christina Fincher, waxaa Diblomaasi.com ku daabacay oo turjubaanay Cabdijabaar Sh. Axmed
Diblomaasi.com: Waa muhiim dal ahaan Soomaaliya inay isweydiiso waxyaabaha ay ugu faa’idaysan karto xariirka Turkiga iyo dalalka Afrikaanka.
Waxaa la filayaa in Afrika ay kaalin firfircoon ka qaadan doonto nidaamka caalamiga ah laga bilaabo qeybta labaad ee qarniga 21aad oo ay ka qaadan doonto door muhiim ah ee masraxa caalamka.
Dalalkaan Afrikaanka ah Turkigu wuxuu la wadaagaa waayo-aragnimadiisa taariikhiga ah, isu-uruurinta bulshada, siyaasadda iyo dhaqanka iyo sidoo kale fursadaha iyo kheyraadka uu la leeyahay waddamada Afrika. Qorshahaan siyaasadeed, waxaa lagu dhisay aasaas taariikhi ah, siyaasadda Turkiga ee Afrika waxay ku lug leedahay sameynta xiriirro siyaasadeed, bani’aadamnimo, dhaqaale iyo dhaqan oo ku dhisan laba geesood, gobol, qaarad iyo heer caalami.
Sanadihii la soo dhaafay, horumar la taaban karo ayay Turkiga ka sameysay dalalka Afrikaanka ah oo ay Soomaali ugu horeyso iyo dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika (SSA) ee dhinacyada badan.
Geedi-socodka Siyaasadda Hindisaha Afrika ee Turkiga, oo bilaabmay 1998-kii, wuxuu xoog yeeshay markii Turkiga noqday xubin indho-indhayn ah iyo bahwadaag istaraatiiji ah oo ka tirsan Midowga Afrika (MA) 2005 iyo 2008 siday u kala horreeyaan. Tan iyo markaas, horumar degdeg ah ayaa laga sameeyay dhinacyo badan sida ganacsiga, maalgashiga, mashaariicda dhaqanka, iskaashiga amniga iyo milateriga, mashaariicda horumarinta. Siyaasadda Hindisaha Afrika ee Turkiga oo si guul leh ku dhammaatay sanadihii ugu dambeeyey, waxaa lagu beddelay Siyaasadda Iskaashiga Afrika illaa 2013kii.
Mugga ganacsi ee Turkigu la leeyahay Afrika, oo ahaa $ 5.4 bilyan oo keliya (TL 50.93 bilyan) sannadkii 2003 ayaa gaadhay $ 25 bilyan sannadka 2020, ayuu yidhi Wasiirka Ganacsiga Turkiga Mehmet Muş.
Wasiirka ayaa hadalkan jeediyay intii lagu guda jiray Madasha Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Turkiga iyo Afrika oo ay soo qabanqaabiyeen Guddiga Xiriirka Dhaqaalaha Dibadda ee Turkiga (DEIK) oo kaashanaya Wasaaradda Ganacsiga iyo Guddiga Midowga Afrika (AUC).
Dhoofinta Turkiga ee qaaradda, oo ahayd ku dhawaad ​​$ 2.1 bilyan, ayaa kor u kacday $ 15.2 bilyan sanadkii hore, ayuu yidhi.
Wakiilo ka socda 45 dal oo Afrikaan ah ayaa ka qaybgalay madasha oo maalintii ugu horraysay marti gelisay ku dhawaad ​​3,000 oo ganacsato Turki ah iyo Afrikaan ah.
Wasiirka Ganacsiga Turkiga Mehmet Muş, oo sheegay in Turkigu muhiimad weyn uu siinayo xiriirka qaaradda, ayaa sheegay in xariirkaan ganacsiga Afrika ay ka dhasheen dadaallo soo bilaabmay 2003 si loo kobciyo xiriirka labada dhinac si isku dheelitiran.
Muddadii u dhexeysay 2003-2020, maalgashiga Turkiga ee Afrika wuxuu ahaa $ 6 bilyan halka qiimaha mashaariicda ay fuliyeen qandaraasleyda Turkiga uu gaaray $ 77 bilyan, sida uu sheegay Wasiirka Ganacsiga Turkiga Mehmet Muş.
Diyaaradda Turkish Airlines (THY) ayaa duulimaadyo ku tagtay 58 meelood oo kala duwan oo qaaradda ah, Wasiirka Ganacsiga Turkiga Mehmet Muş ayaa yiri, isaga oo xusay in ujeeddada Turkiga ee gobolka ay tahay in la sameeyo xiriir ku dhisan is-ixtiraam iyo istiraatiijiyad faa’iido leh.
Wuxuu xusay in Turkigu uusan ku dhaqmin damac dhaqaale oo hal dhinac ah balse uu ujeedkiisu yahay inuu gacan ka geysto horumarka Afrika. Wasiirka ganacsigu wuxuu intaas ku daray in si taas loo gaaro, waddanku wuxuu taageeraa barnaamijyo diiradda lagu saarayo horumarinta dalal badan oo qaaradda ku yaal oo leh danta koowaad ee caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha, saadka iyo ganacsiga haweenka.
Shirkaan waxaa Soomaaliya ugu qeyb-galay Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha XFS Khaliif Cabdi Cumar. Shirka, ayaa waxa Wasiirka ku wehelinaayey Safiirka Soomaaliya ee Turkiga Amb. Jaamac Caydiid Mohamed, u-qaabilsanaha Ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya ee Turkiga Mardiya Maxamed Cabdi iyo mas’uuliyiin kale.
Sida ay sheegato Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya. “Soomaaliya iyo Turkiga, ayaa leh xidhiidh ganacsi oo soo jireen ah iyada oo Soomaaliya ay dalkaasi u dhoofiso badeecado kala duwan oo muhiim, sidoo kalena sanad ba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan wax-soo-saarka dalka ee loo dhoofiyo dalkaasi. Waxa kale oo iyaduna xusid mudan in dhawaan la dhammeystiri doono heshiiska TEPA ee iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Turkiga kaas oo kor u sii qaadi doona suuqyadii ganacsi ee Soomaaliya, fududeynta wax is dhaafsiga, dheeli-tirka ganacsiga iyo weliba horumarinta dhinacyada Maal-gashiga iyo Dhaqaalaha.” ayaa lagu soo qoray bogga baraha bulshada ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha.
Diblomaasi.com: Waa muhiim dal ahaan Soomaaliya inay isweydiiso waxyaabaha ay ugu faa’idaysan karto xariirka Turkiga iyo dalalka Afrikaanka. – Xariirka Soomaaliya iyo Turkiga waa xiriir labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga. Labada ummadood waa lamaane soo jireen ah, oo ku hawlan iskaashiyo horumarineed oo dhow. Soomaaliya waxay Ankara ku leedahay safaarad, Turkiguna wuxuu safaarad ku leeyahay Muqdisho. Fursadaha xariirka labada dal sida muuqato sidii loogu baahnaa Dowladda Soomaaliya uguma faa’idaysato.
Tobban sano ka hor, markii madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, oo markaas ahaa ra’iisul wasaare, uu cagaha soo dhigay Muqdisho, booqashadii ugu sarraysay ee hoggaamiye aan Afrikaan ahayn uu ku yimaado Soomaaliya ayaa soo jiidatay indhaha caalamka dhibaatada ba’an ee bani’aadamnimo ee ka jirta dalka awgeed. Ahmiyadda Turkiga ee Soomaaliya waxay ahayd inuu gargaar bani’aadamnimo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, oo ah kii ugu xumaa ee ka dhaca Bariga Afrika muddo 60 sano ah.
Soomaali badan waxaa wali qaluubtooda ka gaxuuaayo gargaarkii bani’aadamnimo ee Turkiga. Turkiga wuu ka faa’idaystay fursadaasi uu ku soo jiitay qaluubta Soomaalida iyo madaxdooda – waxyaabaha uu hadda Soomaali ka fuliyey waa dhismaha ganacsi ee hotel Decale, xaruntiisa militari ee ugu weyn Afrika iwm. Taasi beddelkeeda bulshada Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin oo kali siddii ay Turkiga ugu sii aadi lahayeen waa sida ay aaminsan yihiin ‘qaarada burwaaqada ee Yurub.
“Waqooyiga-Koonfurta” Miyay badali doontaa Kanaalka Suweys?
Iiraan waxay raadineysaa, marinka “Waqooyiga-Koofurta”, si loo gaaro himmilooyin siyaasadeed iyo midka dhaqaale.
Marka la eego dhibaatada ka dhalatay danbi-darrada markab weyn oo xamuul ah oo laga leeyahay Japan oo lagu magacaabo “Evergiven” kanaalka Suweys kana xiray haadka maraakiibta adduunka, dabayaaqadii bishii Maarso 2021, Iiraan waxay ku baaqday baahida loo qabo in la dardar-geliyo howlaha Wadada “Waqooyi -koonfurta” oo badal u ah kanaalka Suweys.
27-kii Maarso, 2020, mas’uuliyiinta Masar waxay ku dhawaaqeen dhammaadka sabeynta 400-mitir oo dhererkeedu yahay “Evergiven”, toddobaad ka dib markii ay ku soo caariday marinka Suweys, dhaqdhaqaaqii socodkuna wuxuu dib uga bilaabmay marinka maraakiibta caalamiga, kaas oo xiritaankiisa ka dhashay khasaaro balaayiin dollar ah.
Marka laga hadlayo waxa socda ee ku saabsan saameynta marinku ku leeyahay xiriirka ka dhexeeya Beijing iyo Tehraan, qoraa iyo falanqeeye siyaasadeed Imad Abshanas wuxuu meesha ka saaray in xiisadda ka dhex taagan tahay xiriirka Shiinaha iyo Iiraan haddii ay dhacdo in mashruuca ay la wado Hindiya la dhammaystiro “maxaa yeelay waa soo jeedinta kaliya ee udhaxeysa Shiinaha iyo Iiran, maadaama ay jiraan dhinacyo badan oo iskaashi, gaar ahaan marka la eego mid la mid ah oo ka yimid dekedda Bandar Abbas. ”
Dhinaca kale cilmi baare lagu magacaabo Axmed Taaher wuxuu sheegay in Ruushka ujeedkeedu yahay, dhamaystirka xariiqan, inay ku fidiso gacan ku haynta marin istiraatiiji ah ee laga galo biyaha Badweynta Hindiya, si kor loogu qaado saameynta ay ku dhex leedahay dhammaan waddamada ku tiirsan khadka Suweys.
Wuxuu sii raaciyay: tusaale ahaan, Ruushka wuxuu ku arkay Shiinaha isagoo ku boorrinaya shirkadaha maraakiibta inay adeegsadaan marinka waqooyi-galbeed ee ku teedsan Arctic si loo yareeyo waqtiga lagu qaato safarrada u dhexeeya Badweynta Atlantik iyo Badweynta Baasifiga oo ah tartan muhiim ah, waana inay sidoo kale door ku yeelataa arrintan , maadaama ay ka dhigi karto Wadada Waqooyiga – koonfurta” inay bedel u noqon karto marinka heerka xiriirka labada dal ee Ruushka iyo Shiinaha.
Cilmibaaraha ayaa xusay in Ruushka ay sidoo kale dooneyso inay dhameystirto wadadan si ay u gaarto biyaha caalamiga ah ee badweynta Baasifigga iyo Badweynta Atlantikaba siyaabo amaan ah iyadoo loo marayo biyo diirran, taas oo ah hadaf istiraatiijiyad u leh Ruushka inkasta oo ay awood u leedahay inay ku gaarto biyo qabow.
Taaher wuxuu ku soo gabagabeeyay in dacaayadaha siyaasadeed ee baahsan ee ay sameeyeen seddex xisbi (Ruushka, Iiraan iyo Azerbaijan) kulankoodii seddex geesoodka ahaa ee lagu qabtay caasimada Azerbaijan Baku bishii Agoosto 2016, waxay iska indhatireen inbadan oo ka mid ah juqraafiga iyo xaqiiqooyinka taariikhiga ah ee matalaya caqabadaha dhabta ah ee dhameystirka marinka, ugu yaraan.
Tartan kula jira Suweys
Safiirka Iiraan u fadhiya Moscow, Qaasim Jalali, ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay Facebook 27-kii Maarso, 2021, “marinka (woqooyi – koonfur) waa ikhtiyaar weyn oo lagu beddeli karo marinka marinka Suweys iyadoo la dhimayo waqtiga safarka illaa 20 maalmood iyo keydinta ilaa boqolkiiba 30. “.
Jalaali wuxuu intaas ku daray, “Marka la eego go’doominta Kanaalka Suweys maalmihii la soo dhaafay iyo dhaawaca maalin kasta soo gaara dhaqaalaha adduunka ee gaaraya 9 bilyan oo doolar, waxaa loo baahan yahay in la dedejiyo dhameystirka kaabayaasha dhaqaalaha iyo (waqooyiga-koonfurta) marinka oo badal u ah marinka kanaalka (Masaarida), kaas oo noqday mid aad uga muhiimsan sidii hore. ”
Wuxuuna intaasi raaciyay, “Tehraan waxay sidoo kale dooneysaa inay hesho ilo dakhli oo dheeri ah oo ka baxsan ku tiirsanaanta dakhliga saliida marka hore. Taabadalkeed, marinkani wuxuu gacan ka geysan karaa kordhinta mugga dhoofinta saliidda Iiraan.”
Waxaa xusid mudan in aragtidan ay ku jirtay buug uu soo saaray madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo ku qoran luuqadda Beershiya, cinwaankiisuna yahay “Amniga Qaranka Iiraan iyo Nidaamka Dhaqaalaha”, oo ay ku jiraan tixraaca marinkan iyo guulaha laga gaadhay Tehraan laga soo bilaabo aasaaskeedii. .
Kadib daraasado ay sameeyeen dhamaan dhinacyada ay khuseyso “Waqooyiga-Koofurta”, waxaa lafilayaa in isdhaafsiga Ruushka iyo Hindiya ee loo maro Iiraan uu ka kici doono 9 bilyan ilaa 30 bilyan oo doolar inta lagu gudajiray tobanka sano ee soo socota, marka lagu daro keydinta 2500 doolar 15kii tan kasta. badeecadaha habka isweydaarsiga.
Falgalka hay’adaha dhaqaale iyo suuqa
Lacag waa shayga loo isticmaalo kala badalashada badeecadaha iyo adeegyada sharcina ka ah degaan siyaasadeed gaar ah. Lacagta waxaa samaysa dawladda waxaana soo saara, go’aamiyana hadba cadadka la daabacayo bangiga dhexe “Central Bank”.
Bangiga dhexe wuxuu daabacaa lacagta xaashiyaha ama biraha ah ee dalka sharciga ka ah in wax kala badalashada loo isticmaalo “means of payment”.
Sidaa si ka agdhow, lacagta waxaa si dadban u sameeya bangiyada ganacsiga “Commercial Banks”. Bangiyada ganacsigu lacagta xaashiyaha ah ma daabacaan sida bangiga dhexe oo kale awoodaasna maleh, bal se habab kale ayay u tarmiyaan isla lacagtii bangiga dhexe uu sameeyay. Maadaama aynu niri lacag waa wixii si sharci ah oo la ogol yahay in badeecadaha iyo adeegyada loogu kala badasho, bangiyada ganacsisu waxay sameeyaan habab wax kala badalasho oo sharci ah, waa habab dawladdu u ogoshahay iyaguna ay ka macaashaan.
Bangiga dhexe marka uu lacag daabaco, wuxuu hoos u dhigaa dul-saarta “interest rate”, deetana bangiyada ganacsiga ayaa dayn ka qaata si ay iyaguna markooda dadka maalgalinta raba ugu maalgaliyaan lacagtaas iyagoo saaranaya dul-saar tii bangiga dhexe ka badan. Wada shaqayntaas ka dhaxaysa bangiga dhexe iyo bangiyada ganacsiga waxay awood siisay bangiyada ganacsiga.
Sida aan kor ku soo xusnay, bangiga dhexe oo qudha ma sameeyo lacagta suuqa ku jirta, waxaa sidoo kale lacagta sameeya bangiyada ganacsiga. Tusaale bangiyada ganacsigu waxay sameeyaan “checking accounts”, oo ah xisaab aad bangiga ka furanayso, lacagta kuugu jirtana aad habab kala duwan suuqa ugu adeegsan karto, sida credit card, checks iyo electronic transfer, oo kulli ah habab wax kala badalasho oo suuqa laga isticmaalo, markii loo baahdana lacag xaashi ah si fudud loogu rogan karo.
Maadaama aynu niri lacag waa wixii wax kala badalasho gala oo sharci ay dawladdu ka dhigto, hababka “checking accounts” ee suuqa laga isticmaalo wuxuu noqonayaan lacag, sidaa darteed lacagta xaashiyaha ah ee suuqa ku jirta “currency in circulation” ee uu bangiga dhexe sameeyo iyo checking accounts-ka ay bangiyada ganacsigu sameeyaan waa laba hab oo wax kala badalashada loo isticmaalo “means of payment”, suuqa lacagta ka dhex shaqaynaysa na abuura “money supply”.
Maadaama “checking accounts”-ku ay sameeyaan labada hab ee lacagta suuqa taal mid kamid ah, bangiyada ganacsigu kaalin weyn ayay ku leeyihiin lacag samaynta, waxay lacagta ku tarmiyaan hannaanka lacag qabashada “taking deposits” kadibana dayn bixinta “lending out most of the funds received”, sidaas ayay bangiyada ganacsigu suuqa ku galiyaan lacag ka dheeri ah “additional money supply” lacagta xaashiyaha ah ee suuqa ku jirta.
Aan yara faahfaahinno hannaanka tarminta lacagta, ka soo qaad in aad $100 haysatid, deetana aad dhigatay “checking account” bangiga kaaga furan, bangigu wuxuu kaa qabanayaa boqolkii oo xaashi ah wuxuuna xisaabtaada kuugu shubayaa boqol kale oo lambaro ah. Halkaas marka ay joogto ayaa bangiga waxaa u yimid qof doonaya dayn, siyaasadda bangiyada dalkaas u taalna waa in qof walba lacagta laga qabto 10% uu bangigu bixin karin, sidaa darteed bangigu wuxuu siiyay qofkii daynta rabay $90 oo kamid ah boqolkii aad bangiga dhigatay, bal se lambaro ahaan aad hadda xisaabtaada ugu haysatid, hadaba bangigu suuqa wuxuu galiyay $90 oo dheeri ah “additional money supply”.
Howshu way sii socon, ka soo qaad kii sagaashanka qaatay in uu alaab ku iibsaday, qofkii sagaashanka la wareegayna uu bangiga dhigtay, bangiga wuxuu hadana dayminayaa qof kale 90% kamid ah lacagtii ($90) uu qof kani dhigtay bangiga oo u dhigmaysa $81, halka $9 ee kala na uu u haynayo “as a reserve”. Labadaas macaamil kadib, lacagta dheeriga ah ee bangigu uu suuqa galiyay isagoo adeegsanaya hannaankan lacag gabashada deetana dayn bixinta ah waxay noqonaysaa ($90 + $81 = $171), sidaas ayay ku socon lacag tarminta bangiyada ganacsigu ay sameeyaan. Ilaa halkii dollar oo xaashi ahba uu toban dollar oo noocyada lacagta suuqa ku jirta ah u dhigmo.
Si loo ogaado cadadka lacageed ee hannaankan ku abuurma, loona yaqaan “money multiplier” dhaqaale yaqaanku waxay sameeyeen qaacido lagu cabbiro, oo formula-deedi tahay: (money multiplier = 1/proportion of leakage). Leakage-ku waa hadba cadadka lacageed – boqolay ahaan – ee aan bangiga loo ogolayn in uu ka bixiyo lacagaha deposit-ka ah ee la dhiganayo, sida aan tusaaleheenii hore ku soo tusaalayay waxaan ka soo qaaday in “legal reserve requirement”-gu uu yahay 10%. Taas oo ka dhigan lacag kasta oo qof bangiga dhigto in ay bangiga khasab ku tahay in uu hayo 10% oo uusan cid kale daymin karin.
Aan qaacidadeenii usoo noqono, haddii lacagaha bandhiga la dhigtay uu dhammaantood 90% dayn ahaan u bixiyay, hadana dib loogu soo shubtay bangiga (habkii aan soo sharaxnay) waxay taasi la macna tahay in lacagta fadhida “leakage” ay u dhiganto 10% guud ahaan lacagta bangiga la dhigtay, marka money multiplier-ka aad xisaabinaysid waxaan 1 u qaybinaysaa leakage-ka oo ah 10% (1/0.10 = 10), taas oo la macne ah in halkii dollar oo xaashi ah ba uu u jibaarmay $10 oo lacagta suuqa kala socodsiinaysa ah “money supply, M1”, iyadoo tarmintaas na uu ka dambeeyay hannaanka lacag dhigashada iyo dayn bixinta ee bangiyada ganacsigu ay ku shaqeeyaan.
Sidaasi waa marka aan qaacido ahaan ku soo saarayno, bal se waaqicu wuu ka yara badalan yahay oo inta badan money multiplier-ku ma gaari karo 10, sababtoo ah lacagta fadhida way ka badan tahay 10%, maxaa yeelay dadku lacagtooda kuma wada shubtaan checking accounts, sidoo kale mar walba khasab ma aha in bangigu uu 90% lacagta la dhigtay dayn u bixiyay. Bal se taasi meesha ka saari mayso kaalinta muhiimka ah ee bangiyada ganacsigu ku leeyihiin lacag tarminta “money creation”.
Hannaankani mushkiladda uu leeyahay waa in bangigu uusan awoodin in uu siiyo dhammaan dadkii lacagta dhigtay lacagtooda haddii ay hal mar u wada baahdaan, sababtii doonta baahidooda ha isku soo beegtee, sida in uu warwar ka galay bangiga sii jiritaankiisa iwm, taasi bangiga waxay ku keentaa fashil iyo awood la’aan uusan awoodin in uu qof walba lacagtiisii u saaro, wuxuuna galaa xaalad luuqada dhaqaalaha lagu dhaho “bank panic”.
Waa sidaas sida dawladaha dhisan ee lacagtooda samaysta ay isula falgalaan hay’adohooda dhaqaale iyo suuqu.
Hababka ay dawladdu u maarayso sicirka lacagta – Muhiimadda ay lacagtu leedahay
Cadadka lacagta iyo qiimaha addeega iyo badeecadahu waxay leeyihiin xiriir toos ah oo ka qayb-qaata sicir bararka. Sida ku cad aragtidan sicir bararka waxaa keena kordhinta lacagta suuqa ku jirta, halka hoos-u-dhaca sicirka ay keento lacagta suuqa ku jirta oo yaraata.
Maadaama lacagtu tahay shay nolosheena muhiim u ah, wax walba oo aan u baahanana aan ku badalan karno waa in aan fahan buuxa u yeelano waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso, lacagtu waa shay inoo gooya badeecadaha iyo adeegyada aynu u baahannahay, haddii lacagta qiimaheedu xoogan yahay lacag yar ayaa wax badan inoo goysa, haddii lacagta qiimaheedu uu hoos u dhacana waxaa sare u kaca qiimaha badeecadaha, waana meesha sicir bararku ka yimaado.
Muhiimadda ay lacagtu leedahay darteed waxaa laga qoraa macluumaad badan habka ay u shaqayso. Marka sicir bararka iyo xakamayntiisa laga hadlayo waxaa muhiim ah in aad fahanto labo aragtiyood oo fahanka habka ay lacagtu u shaqayso quseeya: quantity theory of money: aragtidani waxay qabtaa lacagta wareegga dhaqaalaha ku jirta in ay tahay midda jaangoysa awoodda gadashada.
Haddii cadadka lacageed ee wareegga ku jira uu bato waxaa hoos u dhacaya awoodda gadasho, tusaale haddii $20 dollar ay kuu goyso haaf bur ah inta aysan kordhin lacagta suuqa wareegga ku samaynaysa, waxaa $25 noqonaya isla hafkii burka ahaa marka lacagta suuqa ku jirta ay kororto, maxaa yeelay wixii bata way qiima dhacaan. Sidaas ayay hoos ugu dhicin awoodda gadasho ee lacagta dollar-ka, marka ay badato lacagta suuqa ku wareegaysa.
Cadadka lacagta iyo qiimaha adeega iyo badeecadahu waxay leeyihiin xiriir toos ah oo ka qayb-qaata sicir bararka. Sida ku cad aragtidan sicir bararka “inflation” waxaa keena kordhinta lacagta suuqa ku jirta, halka hoos-u-dhaca sicirka “deflation” ay keento lacagta suuqa ku jirta oo yaraata. ▪︎modern monetary theory: waa aragti ku saabsan habka casriga ah ee lacagtu u shaqayso. Marka ugu horraysa dawladda ayaa lacagta daabacda, kadibna way qaybisaa lacagtaas.
Dowladdu marka ay lacagta cusub suuqa galinayso waxay adeegsataa laba hab oo kala ah in bangiga dhexe ee lacagta soo saaray uu daymiyo lacag bangiyada ganacsiga iyagu na ay sidaas suuqa ku gashaan, iyo habka labaad oo ah in dawladdu ay kharashaadkeeda ku bixisayso lacagta ay daabacday, sida mushaaraadka shaqaalaha dawladda iwm. Labadaas hab ayay dawladdu lacagta ku galisaa wareegga dhaqaale ee ay suuqa ka dhex samayso lacagtu.
Marka ay dawladdu u baahato in ay lacagta dib u soo celiso waxay isticmaashaa laba hab oo kala ah in dayntii bangiyada ganacsiga ay siisay ay ku cadaadiso in ay soo celiyaa iyo in ay canshuurta qaado, sidaas ayay lacagtii dib ugu soo noqotaa khasnadda dawladda, markaas ayay hadana sidii hore oo kale mar kale ugu dartaa wareegga suuqa, iyadoo isla labadii hab isticmaalaysa, dayn bixin iyo kharashaad bixin.
Sida kaaga muuqata sharraxaadda aragtidan, dawladda ayaa maamusha lacagta, iyada ayaa marka ay rabto cadadkii ay rabto ku darta wareegga suuqa, isla iyada ayaana cadadkii ay doonto wareegga dib uga saarta iyada oo adeegsanaysa hababka aan soo sheegnay. Modern monetary theory waxay qabtaa in lacagtu qiima lahaanayso inta canshuurta lagu qaadayo, maxaa yeelay canshuurtu waxay kamid tahay hababka lagu kontorooli karo wareegga ay lacagtu samayso iyo tirida lacageed ee xilli gaar ah suuqa ku jirta.
Marka uu kordho dalabka lacagta ee suuqa dawladda ayaa bangiyada ganacsiga dayn siisa, sidoo kale waxay kordhisaa kharashaadka ay bixinayso, halka marka lacagtu ay suuqa ku badato qiima dhacna in ay samaysana looga baqo ay dawladdu dib uga saarto qadar kamid ah lacagta wareegga ku jirta, iyada oo kordhinaysa canshuurta, dayntii bangiyada ay siisayna ka soo celinaysa. Sidaas ayay dawladdu awood ugu leedahay maaraynta sicir bararka iyo isbadalada suuqa ka dhex dhacaya.
Filashada sicir bararka
Falgalka hay’adaha dhaqaale iyo suuqa:
Lacag waa shayga loo isticmaalo kala badalashada badeecadaha iyo adeegyada sharcina ka ah degaan siyaasadeed gaar ah. Lacagta waxaa samaysa dawladda waxaana soo saara, go’aamiyana hadba cadadka la daabacayo bangiga dhexe “Central Bank”. Bangiga dhexe wuxuu daabacaa lacagta xaashiyaha ama biraha ah ee dalka sharciga ka ah in wax kala badalashada loo isticmaalo “means of payment”.
Hannaankani mushkiladda uu leeyahay waa in bangigu uusan awoodin in uu siiyo dhammaan dadkii lacagta dhigtay lacagtooda haddii ay hal mar u wada baahdaan, sababtii doonta baahidooda ha isku soo beegtee, sida in uu warwar ka galay bangiga sii jiritaankiisa iwm, taasi bangiga waxay ku keentaa fashil iyo awood la’aan uusan awoodin in uu qof walba lacagtiisii u saaro, wuxuuna galaa xaalad luuqada dhaqaalaha lagu dhaho “bank panic”. – Waa sidaas sida dawladaha dhisan ee lacagtooda samaysta ay isula falgalaan hay’adohooda dhaqaale iyo suuqu.